सामाजीक संजाल सबैभन्दा पहिलो मिडिया हो : गणेश पाैडेल - MeroReport
सामाजीक संजाल सबैभन्दा पहिलो मिडिया हो : गणेश पाैडेल
ईलामका गणेश पाैडेल हाल दक्षिणा कोरियामा छन् । स्नातकसम्मको अध्ययन पुरा गरेका गणेशलाई साहित्यिक लेख रचना पढ्न खुबै रुचि छ । गीतसंगीत सुन्न अनि लेख्न रुचाउँने गणेश ब्लग लेखनमा पनि सक्रिय छन् । मेरो रिपोर्टको साप्ताहिक स्तम्भ साताका ब्लगरमा आज हामीले उनै गणेश पाैडेलसँग कुराकनी गरेका छाै । प्रस्तुत छ उनीसँग गरिएको कुराकानी :
सामाजिक संजालमा आफुलाई यो नै हुँ भन्ने गरि चिनाउन त आजसम्म केहि गरिसकेको छैन ।
ब्लगिङ नै किन भनिन्छ ?
यो जमाना सुचना र प्रबिधीको हो । ईन्टरनेटको विकाससँगै हर घर हर मान्छेमा आफ्नो पहुँच पुर्याउने आधुनिक साधनको रूपमा म ब्लगिङलाई लिन्छु । ब्लगिङमा आफ्नोपन हुन्छ । मनमा लागेका कुरा कुनै छेकबार बिना नै लेख्न पाईन्छ ।
दाईबाट मैले ब्लग भनेको के हो जानेको थिएँ तर सबै कुरा भने गुगल गरेर जानेको हुँ ।
म शब्दहरूसँग रमाउने मान्छे । त्यसैले मेरा मन भित्रका भावनारूपी शब्दहरू पोख्नको लागी ब्लगिङ गर्छु ।
विषयवस्तुका सबालमा भने साहित्य नै हुन्छन् । मलाई बिषेश मानव संवेदनाले छुन्छ । सम्योगान्त भन्दा बियोगान्त धेरै लेख्छु ।
तपाईले अकबरे खुर्सानी बाहेक अरु पनि चलाउनु हुन्छ ?
करिब २ ३ वर्ष अघी यौटा साहित्यिक र अर्को समाचार तथा सुचना मूलक ब्लग गरी अन्य दुई ब्लग पनि चलाउँथे तर ति दुई ब्लगलाई समय दिन सकिन र छोडे । अहिले चैं यहि एउटा मात्र चलाउँछु ।
मेरो ब्लग पढेर ब्लगमै प्रतिक्रिया दिनेहरूको संख्या त न्युन छ । ब्लगका अलावा मेरो ब्लग रचनाका बारेमा प्रतिक्रियाहरू सामाजिक संजाल फेसबुक टुईटरमा धेरै दिनुहुन्छ । र ति प्रतिक्रियाहरु सकारात्मक र नकारात्मक दुबै खाले छन् ।
मेरा रुचिहरु पुस्तकहरू पढ्ने, घुमघाम, ख्याल-ठट्टा गर्न मनपराउँछु ।
अँ‍‍‍‍‍‍‍ म मेरो रूचिकै बिषयहरूलाई आधार बनाएर ब्लगमा शब्दहरू सिर्जिन्छु ।
ब्लग लेखन वा ब्लगमा समेटिएका सामग्रीसँग जोडिएका कुनै रमाइला घटना वा प्रसंग भए बताई दिनुहोस न ।
त्यस्तो बिषेश केही छैन ।
त्यस्तै लाग्छ सामाजीक संजाल सबैभन्दा पहिलो मिडिया हो ।